Neymar & Suarez oo hoggaaminaya xiddigaha magacyada waa weyn ee seegay abaal-marinta Ballon d’Or 2019… (Eeg Shax laga sameeyey!) – Gool FM
Barcelona oo guul dirqi ah ka gaartay kooxda Granada… +SAWIRRO
Cristiano Ronaldo oo guul ku hoggaamiyay Juventus kaddib markii ay ka adkaadeen kooxda Parma…+SAWIRRO
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Barcelona Iyo Granada ee horyaalka La Liga oo la shaaciyay
Neymar & Suarez oo hoggaaminaya xiddigaha magacyada waa weyn ee seegay abaal-marinta Ballon d’Or 2019… (Eeg Shax laga sameeyey!)
(Paris) 22 Okt 2019. Majaladda “France Football” ee dalka France ayaa si rasmi ah shaaca ka qaaday xalay, liiska magacyada musharraxiinta abaal-marinta xiisaha badan ee Ballon d’Or 2019.
France Football waxa ay ku dhawaaqay liis ka kooban 30 ciyaaryahan kuwaasoo laga soo xuli doono saddexda ciyaaryahan ee kama dambeysta isla soo gaari doona kuna tartami doona ciyaaryahanka ugu fiican Adduunka ee sanadkan 2019.
Waxaa la saadaalinayaa in Ronaldo, Messi iyo Van Dijk ay yihiin saddexada ciyaaryahan ee kama dambeysta abaal-marintan isla tagi doona.
Haddaba waxaan halkaan hoose ku eegeynaa xiddigaha magacyada waa weyn ee laga tagay oo aan loo soo xulan abaal-marinta Ballon d’Or 2019.
Xiddigaha laga tagay waxaa hoggaaminaya Neymar Jr, Luis Suarez, iyadoo xitaa ay ku jiraan Robertson & Kante.
Halkaan ka eeg shaxda laga tagay oo aan loo soo xulan abaal-marinta Ballon d’Or 2019 & Keydkooda:-
Goolhaye Jan Oblak ayaa ku guuleystay abaal-marinta Zamora Trophy xilli ciyaareedkiisii 2018-19 taasoo ah goolhayaha ugu wanaagsan horyaalka La Liga, waana xilli ciyaareedkiisii afaraad oo xiriir ah oo uu sidaa sameynayo kaliya waxaa laga dhaliyey 27 gool 37 kulan oo uu ciyaaray, goolhayahan ayaana loo soo xulan Ballon d’Or.
Dani Alves (San Paulo)
Dani Alves kaasoo xirfaddiisa ciyaareed ku guuleystay 43 koob kaddib markii xulkiisa Brazil oo uu kabtan u ahaa uu garaacay Peru Final-kii Copa America.
Daafaca reer Brazil ayaa caddeeyay inuu weli u qalmo inuu boos ka helo musharrixiinta abaalmarinta Ballon d’Or 2019, balse waa laga tagay.
Pique, kaasoo ka caawiyey Barcelona inay ku guuleysato horyaalka La Liga isla markaana gaarsiiyey afar dhammaadka Champions League, kaasoo weli loo arko mid ka mid ah daafacyada ugu sarreeya adduunka ayaa isagana laga tagay oo aan la soo xulan.
Daafacan reer France ayaa kooxdiisa Manchester City kula guuleystay afar koob sanadkan 2019, laakiin waxa uu ka mid yahay xiddigaha laga tagay oo aan loo soo xulan musharraxnimada abaal-marinta Ballon d’Or 2019.
Daafaca dambeedka bidix ee kooxda Liverpool ayaa liiskan laga waayey, waana qaladka ugu weyn ee France Football ay sameysay, maadaama ay ka soo tagtay Robertson.
Robertson ayaa kaalin mug leh ku lahaa inay Liverpool ku guuleysato Champions League waxaana uu sameeyey 13 caawin xilli ciyaareedkii 2018-19.
Ciyaaryahanka kooxda Real Madrid ee Casemiro waa magac kale oo aan loo soo xulan abaal-marinta Ballon d’Or 2019.
Xiddiga xulka qaranka Brazil ee Casemiro ayaa ka caawiyey xulkiisa Seleção inay ku guuleystaan Copa América, wuxuu dhaliyay goolkiisii ugu horreeyay ee xulka qaranka tartankan.
N’Golo Kante waa mid ka mid ah xiddigaha khadka dhexe ee ugu fiican kubadda cagta adduunka waqtigan.
Waxa uu daboolay khadka dhexe ee kooxda Chelsea, isagoo qeyb ka ahaa guushii UEL Cup, sidoo kale xiddigan xulka qaranka France ayaa ku jiray kooxda safka Yurub 2018 ee UEFA Team of the Year & Shaxda UEL ee xilli ciyaareedka 2018/19.
Da’yarkan hibada leh ee ka tirsan xulka qaranka Germany iyo kooxda Bayern Munich, Joshua Kimmich ayaa daafaca iyo khadka dhexe shaqo fiican ka qabtay waxaana uu kooxdiisa Munich ka caawiyey inay ku guuleysato horyaalka Bundesliga Jarmalka xilli ciyaareedkii 7-aad oo xiriir ah.
Neymar ayaa dhaliyey 23 gool waxaana uu sameeyey 13 caawin 28 kulan oo uu u ciyaaray kooxdiisa PSG xilli ciyaareedkii la soo dhaafay, laakiin fursad uma helin inuu ka soo muuqdo liiska 30-ka ciyaaryahan ee u sharraxan abaal-marinta xiddiga ugu fiican Adduunka 2019.
Sababta ugu weyn ee looga tagay waa inuusan ciyaarin kulamo ku filan, iyadoo xiddigan reer Brazil uu muddo badan dhaawacyo la maqnaa.
Suarez ayaa ka mid ah xiddigaha laga tagay oo aan lagu soo darin liiskan 30-ka xiddig ka kooban, waxaana weeraryahanka Barcelona uu filanayey inuu ka soo dhex muuqan doono musharraxiinta laakiin waa laga tagay.
Bandhiggiisii hooseeyey ee Champions League uu ku soo bandhigay xilli ciyaareedkii hore ayaa laga yaabaa inay fure u tahay sababta looga tagay, laakiin xilli ciyaareedkan bilowga ah waxa uu dhaliyey 7 gool 9 kulan oo uu saftay tartammada oo dhan.
13 gool iyo 19 caawin 19-sano jirkaan kagama filnaanin inuu ka soo muuqdo musharraxiinta abaal-marinta Ballon d’Or oo waa laga tagay.
Inuu ku guuleysto abaal-marinta Kopa Trophy ee la siiyo xiddigaha da’doodu ka hooseyso 21-ka sano ayaa magdhow u noqon doonta isaga.
Xiddigaha keydka u fadhiya shaxdan laga tagay:-
Ederson Moraes, Giorgio Chiellini, Sergio Ramos, Paul Pogba, David Silva, Hakim Ziyech iyo Lucas Moura.
Haddaba halkaan hoose ka eeg shaxda laga tagay ee aan ka soo muuqan doonin musharraxiinta abaal-marinta Ballon d’Or 2019:-
Rikoorradii laga diiwaan geliyey kulankii ay kooxda Arsenal xalay guuldarrada kala kulantay Sheffield United ee Premier League
Kooxda Elman oo Saakay soo bandhigtay saxiixyadeeda cusub… + SAWIRRO